မြန်မာလူငယ်တွေကြားခေတ်စားနေတဲ့ Viu ပေါ်ကထိပ်တန်းဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကား (၅) ကား
မြန်မာလူငယ်တွေကြား ခေတ်စားနေတဲ့ Viu ပေါ်က အမိုက်စား ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကား (၅) ကား
24 May 2018 . 8:32 PM
အခုခေတ်မှာဆိုရင် အသက် ၁၈နှစ်ကနေ ၃၄ နှစ်ကြား မြန်မာလူငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဖုန်းကနေ Viu App ကို အသုံးပြုပြီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ကြတာ များပါတယ်။ အဲဒီအရွယ်ရဲ့ ၇၀ % သော Viu အသုံးပြုသူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ အချိန်ပိုတွေကို အိမ်ပြန်ကားပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ရုံးရဲ့ Break Time တွေမှာ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှ မဟုတ်လည်း အလုပ်ပြီးလို့ အိမ်မှာနားနေတဲ့အချိန်မှာ အိပ်ရာပေါ်မှာ အေးဆေးနှပ်ရင်းဖြစ်ဖြစ် ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ကြတာ အများဆုံးပါပဲ။
ဒီလို အသုံးပြုသူတွေများတယ်ဆိုတာလည်း Viu App ကို လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ရယူအသုံးပြုနိုင်လို့ ဖြစ်သလို ခုမှ စတင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီ Viu App Link မှာ ဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ဒီလို လူငယ်တွေအတွက် ထိပ်တန်းဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားကောင်း (၅) ကားနဲ့ သုံးသပ်ချက်လေးတွေကို အခုလို ညွှန်းပေးပါရစေ။
၁) Sarkar (ဆာခါး)
ဘောလီးဝုဒ်ရဲ့ မီဂါစတားဖြစ်တဲ့ အမီတာဘဂျမ်း ဦးဆောင်ပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကြီး
သုံးသပ်ချက် : Sarkar ဆိုတာ မင်းသားကြီး အမီတာဘဂျမ်းက အဓိကဇာတ်ကောင်နေရာပါဝင်ထားတဲ့ မှုခင်းဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်နေတုန်း ဇာတ်ကားတော့ စပြီလို့ နားလည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲ ဇာတ်ကားက အဆုံးသတ်သွားပါပြီ။ ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်တွေဟာ ချီးကျူးရလောက်အောင် ကောင်းပြီး ဇာတ်ကောင်စရိုက်အားလုံးပီပြင်တာလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာ Amitabh Bachchan နဲ့အတူသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ Abhishek Bachchan လည်းပါတဲ့အတွက် သားအဖနှစ်ယောက် အတွဲညီညီသရုပ်ဆောင်တာကိုလည်း တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း : Subhash Nagre (Amitabh Bachchan) က ချမ်းသားပြီး သြဇာကြီးမားတဲ့ ဘုံဘေမြို့သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံက ကြီးမားခန့်ထည်လှတဲ့ အိမ်တော်ကြီးမှာ ဇနီး Pushpa ၊ သားအကြီး Vishnu နဲ့ မိန်းမ Amrita နဲ့ သားအငယ် Shankar တို့နေထိုင်ခဲ့ရာမှာ တစ်ရက်ကြမ္မာငင်လာပါတော့တယ်။ နိုင်ငံရေးသားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Motilal Khurana ဟာ အသတ်ခံခဲ့ရပြီး လူသတ်သမားက Molital ကို လုပ်ကြံဖို့ သူ့ကို ငှားရမ်းတာဟာ Subbash ဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
Subhash ဟာ အဖမ်းခံရပြီး အကျဉ်းကျခဲ့တဲ့အခါ သူ့အတွက် တရားရုံးမှာလည်း မျှော်လင့်ချက်မရှိသလောက်နည်းနေခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာ ဒီလူသတ်မှုကိစ္စအတွက်မဟုတ်ဘဲ တရားဥပဒေမစိုးမိုးတဲ့အခါမျိုးမှာ Godfather Mafia တစ်ယောက်လို ကိုယ့်အာဏာစက်နဲ့ ကိုယ်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး သြဇာအာဏာကင်းမဲ့ပြီး အကူအညီမဲ့နေတဲ့ Subhash ကို ဘယ်လိုအရာတွေ ဖိအားပေးလာဦးမှာလဲ၊ သားအငယ် Shankar ကို သတ်ဖို့ ကြံစည်နေတဲ့သူကလည်း သားအကြီး Vishnu ဖြစ်နေတဲ့အခါ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်လက်ကြည့်ရှုရမှာပါ။
၂) Nishabd (တိတ်တိတ်ပုန်း)
Amitabh Bachchan ရဲ့ Masterpiece ဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကားဖြစ်ပြီး အသက် ၆၀ အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ရဲ့ အသက် ၁၈နှစ်အရွယ် သမီးကြီးရဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ချစ်ကြိုးသွယ်မိတဲ့ ဒရာမာဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။
သုံးသပ်ချက် : Amitabh Bachchan လို Genius တစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာအရည်အသွေးကို ဥပေက္ခာပြုဖို့ဆိုတာ ခက်ခဲလွန်းပါတယ်။ ရုပ်ရှင်မရိုက်တာကြာပေမယ့်လည်း အမီတာဘဂျမ်းခေတ်ကုန်သွားပြီလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး။ Nishabd ကိုပဲ ကြည့်ရင် သူ့ဟာနဲ့သူ ကောင်းလွန်းနေပါတယ်။ ကန့်သတ်ချက်တွေအားလုံးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး လက်တွေ့ဘဝမှာ ရှိနေတတ်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ကြည့်ရမှာပါ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်နာတဲ့သူတွေကတော့ ဒီရုပ်ရှင်ကို လက်ခံကြမှာ ဖြစ်ပြီး Amitabh ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေအတွက်ဆိုရင် ကျွန်တော့်မှာ ဖော်ပြစရာစကားလုံးတောင်မရှိအောင် သဘောကျမိပါတယ်။ သူ့ဇာတ်ရုပ်အတိုင်းအတိအကျသရုပ်ဆောင်နိုင်သလို အရင်က သူ့ရဲ့ဒီလောက် သဘာဝကျတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုမျိုးကို မတွေ့ခဲ့ရဖူးသလိုတောင် ဖြစ်နေပါတယ်။ သူဟာ အမြဲသဘာဝကျကျသရုပ်ဆောင်တတ်ပေမယ့် Nishabd မှာတော့ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးပုံစံကို မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ ဒီဇာတ်ကားကို (လုံးဝ) လက်မလွှတ်ဘဲ ကြည့်သင့်တယ်လို့ ပြောပါရစေ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း : Vijay (Amitabh Bachchan) ဟာ သူ့ဇနီး Amrita နဲ့ အတူ ချမ်းချမ်းသာသာကြွယ်ကြွယ်ဝဝနဲ့ အိန္ဒိယမှာ နေထိုင်နေကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်သက်က ၂၇ နှစ်လောက်ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး သူတို့ရဲ့ သမီးလေး Ritu တောင် အသက် ၁၈ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ဧရာမခြံအကျယ်ကြီးရှိပြီး Vijay ရဲ့ ဝါသနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံလျှောက်ရိုက်ရာနေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Vijay ရဲ့ ဇနီး Amrita ကတော့ Kuchipudi လို့ ခေါ်တဲ့ အိန္ဒိယရိုးရာအကမယ်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ရွှေတံဆိပ်နှစ်ခုတောင် ဒီအကနဲ့ ဆွတ်ခူးခဲ့ပေမယ့် မိသားစုကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက် သူ့ဝါသနာကို စွန့်လွှတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ အားလပ်ရက်တစ်ရက်မှာ သူတို့ရဲ့ သမီး Ritu ဟာ Jia လို့ ခေါ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်မလေးကို အိမ်အလည်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ Jia ဟာ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဘရစ္စဘိန်းမြို့မှာ အိမ်ထောင်ကွဲအမေနဲ့ တူတူနေတဲ့ ကလေးအရမ်းဆန်တဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်ပါတယ်။ Ritu တစ်ယောက်ခြေကျင်းဝတ်လည်သွားတဲ့အခါမှာတော့ Vijay နဲ့ Jia ကြားအခြေအနေတွေ ပြောင်းလဲကုန်ပါတော့တယ်။
Amrita ဟာ Vijay ရုတ်တရက် ရွှင်ရွှင်မြူးမြူးရယ်ရယ်မောမောတွေ ဖြစ်လာတာ၊ သီချင်းလေးတအေးအေး ဖြစ်လာတာတွေကို သတိထားမိလာပါတော့တယ်။ ရုတ်တရက် Ritu က Jia ကို အိမ်ကထွက်သွားဖို့ မောင်းထုတ်တဲ့အခါ Vijay က ဟန့်တားခဲ့ပါတယ်။ Amrita ရဲ့ အကို Shridar က ဒီမိသားစုဆီကို ခဏအလည်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ…
၃) Janatha Garage ( မတရားမှုကို ရင်ဆိုင်ခြင်း)
စူပါစတားတွေဖြစ်တဲ့ NTR နဲ့ Mohanlal တို့ရဲ့ အံ့မခန်းသရုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ဇာတ်ကား
သုံးသပ်ချက် :Janatha Garage ဟာ အပတ်စဉ် ကြည့်နေကြ Bollywood ဇာတ်ကားတွေနဲ့ မတူဘဲ ကွဲထွက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားဟာ အက်ရှင်ဒရာမာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကောင်တွေက ပြင်းပြတဲ့ခံစားချက်တွေကို ပုံဖော်ပေးစွမ်းပါလိမ့်မယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့ လူတွေကို ကူညီရတာသဘောကျတဲ့ မက္ကင်းနစ်တစ်ယောက်တွေ့ဆုံပူးပေါင်းမိကြပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးဟာ သူတို့ရဲ့ ကားပြင်အလုပ်ရုံက လူတွေကို ကူညီကယ်တင်ဖို့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ရပုံဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း : Sathyam ဟာ ကျေးရွာတစ်ရွာက ဝပ်ရှော့လေးတစ်ခုရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကို ဖြစ်တဲ့ Shiva ကတော့ ဟိုက်ဒရာဘတ်မှာ အလုပ်လုပ်နေပြီး Sathyam အတွက် ဒီဝပ်ရှော့ကို ဖွင့်ထားပေးတာ ဖြစ်ပါတ်။ အဲဒီညီအကိုတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်စုဟာ Janatha Gargae လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ အဲဒီဝပ်ရှော့လုပ်ငန်းကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ဆောင်နေကြတာပါ။ တစ်ရက်မှာ Sathayma ရဲ့ အသိမိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆင်းရဲသားလူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသွားတက်နေတဲ့ သမီးလေးဟာ Accident တစ်ခုဖြစ်ပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ Sathyam နဲ့ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ သိလိုက်ကြတာက အဲဒီကောင်မလေးဟာ ကြေးစားလူမိုက်တွေရဲ့ မုဒိမ်းကျင့်သတ်ဖြတ်တာကို ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီကိစ္စအတွက် Shiva ရဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ရဲမှုး Chandrashekar ရဲ့ အကူအညီကို ယူခဲ့ပေမယ့်လည်း ဘာသက်သေမှ မရှိတာရော၊ ဟိုဘက်က သြဇာကြီးမားတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်တာကြောင့်ရော အကူအညီမဲ့နေခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ Janatha Garage က ညီအစ်ကိုတွေဟာ ကြေးစားလူမိုက်တွေကို ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ လက်စားချေပြီး မတော်တဆမှုအသွင်ဇာတ်လမ်းဆင်ခဲ့ပါတယ်။ Chandrashekar က ဒီကိစ္စကို သိရှိပြီး နောက်ဆက်တွဲဖြစ်လာမယ့် အကျိုးဆက်တွေကို သူတို့ကိ သတိပေးခဲ့တဲ့အခါ…
၄) Bobby Jasoos ( စုံထောက်ဘော်ဘီ)
လူသိအများဆုံးဘောလီးဝုဒ်ဟာသဇာတ်ကားတွေထဲက တစ်ကား၊ မိသားစု တစ်စုလုံး အတူထိုင်ကြည့်ရှုလို့ ရမယ့် ဇာတ်ကား
သုံးသပ်ချက် : Jasoos ကို ကြည့်ဖို့ အချိန်ကုန်ရတာ တန်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာတင် ဒီဥာဏ်ကောင်းလှတဲ့ စုံထောက်မလေးဟာ အကြီးကြီးတွေ ထုတ်ဖော်ဖို့ ဆန္ဒရှိပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ လင်ခန်းမယားခန်းနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ အတွဲလိုက်ချောင်းတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေပဲ လုပ်နေရပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်း : သမီးကြီးဖြစ်တဲ့ Bobby (Vidya Balan) ဟာ ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့မှာ မိသားစုနဲ့အတူ နေထိုင်နေပြီး နောက်ယောင်ခံလိုက်ရတာ၊ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရတာကို ဝါသနာထုံသူပါ။ သူ့အဖေက ခွင့်မပြုပေမယ့် စုံထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကြံစည်နေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စွန့်စားခန်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ သူရဲ့ သူငယ်ချင်း Afreen အတင်းအကြပ်မိဘပေးစားမင်္ဂလာဆောင်ခံရတဲ့ ကိစ္စလည်းပါပါတယ်။
တစ်ခါမှာတော့ ချမ်းသာတဲ့ လူတစ်ယောက်က Bobby ကို အလုပ်တာဝန်စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ကလေးမလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ အသက်၊ နာမည်နဲ့ မွေးရာပါအမှတ်အသားတွေ ပြောပြပြီး ဟိုက်ဒရာဘတ်မြို့ထဲ ရှာခိုင်းတာပါ။ အဲ့ဒါအပြင် နောက်ဆုံးအလုပ်တာဝန်အနေနဲ့ လူတစ်ယောက်ကိုလည်း ထပ်ရှာခိုင်းခဲ့ပါသေးတယ်။
အဲဒီလို အချိန်မျှာ Tasawur (Ali) လို့ ခေါ်တဲ့ ခပ်ချောချော တီဗွီအစီအစဉ်တင်ဆက်သူတစ်ယောက်ဟာ တခြားသူတွေရဲ့ လက်ထပ်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ပြီး ဘော်ဘီကို လက်ထပ်ခွင့်ရဖို့ သူ့မိသားစုကို ချဉ်းကပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘော်ဘီကတော့ သူ့ကို ငြင်းမယ်လို့ ထင်တဲ့အတွက် ဒီလို ချဉ်းကပ်တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူချမ်းသာ သူဌေးကြီးက ကလေးမနှစ်ယောက်ကို ဘာတွေလုပ်ခဲ့ပါသလဲ? Bobby ကရော Tasawur နဲ့ ကိစ္စကို ဘယ်လို ဖြေရှင်းမှာလဲ ဆက်ကြည့်ရမှာပါ။
၅) JaanEmann (သုံးပွင့်ဆိုင်)
Salman Khan ပါတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကား
သုံးသပ်ချက် : Jaanemann ဇာတ်ကားဟာ Salman khan ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုကို အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးမြင်ရမယ့် ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ မူလဇာတ်လမ်းထဲမှာမှ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုထပ်ပျိုးထားသလို နောက်ထပ်ဇာတ်ဝင်ခန်းက ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာ အမြဲတမ်းသိစေချင်နေမှာပါ။ Salman Khan နဲ့ Akshay တို့ဟာ Preity Zinta ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်တည်းအပေါ်ချစ်မိတဲ့အခါ ဘယ်လို အတက်အကျတွေနဲ့ ဒီသုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ဖွဲ့စည်းထားသလဲ။ သူ့ရဲ့ဇနီးဟောင်းကို မယားစရိတ်အများကြီးထောက်ပံ့ရတဲ့ ဘဝကနေ လွတ်ကင်းအောင်လို့ ဘယ်လို ပြန်ချစ်လာအောင် လုပ်မလဲ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းချုပ် : Jaan-E-Mann ဟာ ရိုမန်တစ်ဆန်တဲ့ ဘောင်ထဲမှာ Suhaan နဲ့ Piya တို့ရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကနေ ကွာရှင်းမှုကို ဦးတည်သွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ Priya ဟာ သူ့ရဲ့ ကောလိပ်ကျောင်းသူငယ်ချင်း Agastya နဲ့ စေ့စပ်သွားတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို ဦးတည်သွားခဲ့ပါတယ်။ Agastya ဟာ Piya တစ်ယောက် Suhaan ကိုပဲ ဆက်ချစ်နေပြီး သူ့ကို မချစ်ဘူးဆိုတာ သိရတဲ့အခါ…
တကယ်လို့များ ဒီအားလပ်ရက်မှာ Movie Marathon ကို မမောတမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ Viu ကနေပြီး မေလ ၂၅ ရက်နေ ၂၇ ရက်နေ့ထိ ပေးထားတဲ့ FREE BOLLYWOOD WEEKEND အစီအစဉ်လေးရှိနေပါတယ်။ Viu မှာ ရှိသမျှ ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားမှန်သမျှကို အခမဲ့ကြည့်နိုင်တဲ့အတွက် ဒီအခွင့်အရေးကို လုံးဝလက်မလွှတ်သင့်ပါဘူး။
ဒါတင်မဟုတ်ဘဲ Viu မှာ အလန်းဆုံး အာရှဇာတ်ကားနဲ့ စီးရီးတွေမျိုးစုံ၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာပြည်ကနေ ရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ Comedy ၊ Horror ၊ Romance ၊ Action နဲ့ Drama ဇာတ်ကားတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ နေ့တိုင်းနီးပါး ဇာတ်ကားအသစ်တွေ တင်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်း ရွေးချယ်စရာတွေ အများအပြားရှိမှာပါ။ ပြီးတော့ တခြား Apps တွေနဲ့မတူခြားနားတဲ့ Viu ရဲ့ အကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ Viu မှာ ရှိတဲ့ Video အားလုံးဟာ ၁၀၀% မြန်မာစာတမ်းထိုးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို အရမ်းမိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ရယူဖို့ ဘာတွေ စောင့်နေဦးမှာလဲ။ Viu App ကို ခင်ဗျားရဲ့ Android ဖုန်းမှာ Google Play Store ကနေ ခုပဲ ဒေါင်းလုတ်ရယူလိုက်ပြီး Viu မှာရှိတဲ့ အလန်းဆုံး အာရှရုပ်ရှင်နဲ့ စီးရီးတွေကို ကြည့်ရှုခံစားခွင့်ကို ရယူလိုက်ပါ။ Facebook Account နဲ့ Sign up လုပ်ပြီး တစ်လ အခမဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရှုခွင့် (One- month free trial) ကို ရယူနိုင်သလို ငွေ ၁၅၀၀ ကျပ်တည်းနဲ့ Viu Premium ကို Subscribe လုပ်ပြီး နောက်ထပ်ဇာတ်ကားနဲ့ စီးရီးစ်တွေကို ကြည့်ရှုခွင့်ကိုလည်း ရယူနိုင်ပါတယ်။
Viu အကြောင်းထပ်သိချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ Viu ဆိုတာ over-the-top (OTT) video service တစ်ခုဖြစ်ပြီး Vuclip ရဲ့ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Viu ကို စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း၊ မြန်မာ၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းက နိုင်ငံ ၈ နိုင်ငံအပါအဝင် ဈေးကွက် ၁၆ ခုမှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ စပြီးချပြတည်းက ချီးကျူးဂုဏ်ပြုမှုတွေ အများကြီး ရရှိထားပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်ရဲ့ HKICT Awards မှာ အကောင်းဆုံး မိုဘိုင်းလ် App ဆုကနေ ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသတွင်း အသုံးအများဆုံး App အနေနဲ့ Google က အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့အထိ ပါပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Viu ဟာ Beta Version အနေနဲ့ ဧပြီလ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ Viu ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ကတော့ မြန်မာဈေးကွက်နဲ့ သင့်တော်တဲ့ အာရှရဲ့ အကောင်းဆုံး Content တွေပေါ်မှာ အခြေပြုရပ်တည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဈေးကွက်မှာရှိတဲ့ ကြည့်ရှုသူဖောက်သည်တွေအတွက် ခိုင်မာပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ ရပ်တည်ချက်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ထားပြီး ဈေးကွက်ညွှန်းကိန်းတွေအားလုံးရဲ့ ညွှန်ပြချက်အရ မြန်မာဈေးကွက်ဟာ Viu လို အရှေ့တောင်အာရှမှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ Content/ broadcast houses တွေရဲ့ အစဉ်မပြတ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ အစီအစဉ်တွေနဲ့ Freemium ထုတ်ကုန်ပေါင်းစပ်ထားတဲ့အရာကို သုံးစွဲဖို့ အသင့်ရှိနေပြီလို့ သိထားပါတယ်။
Vuclip လို့ ခေါ်တဲ့ PCCW Media Company ဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ ဆီလီကွန် Valley မှာ ရုံးစိုက်ထားတဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်း နိုင်ငံ ၂၂ ကျော်မှာ ဦးဆောင်နေတဲ့ Video – on- demand service provider ဖြစ်ပါတယ်။ PCCW Limited ဟာတော့ Telecommunications ၊ Media ၊ IT Solutions ၊ Property Development and Investment နဲ့ အခြားလုပ်ငန်းတွေမှာ မြှုပ်နှံထားတဲ့ ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ PCCW Media ဟာ အကြီးဆုံးနယ်မြေခံ pay-TV လုပ်ငန်းတွေနဲ့ Now TV လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတာတွေအပြင် Vuclip ကတဆင့် over-the-top (OTT) video service Viu ရဲ့ သတ်မှတ်ပြဌာန်းချက်အတွင်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
မွနျမာလူငယျတှကွေား ခတျေစားနတေဲ့ Viu ပျေါက အမိုကျစား ဘောလီးဝုဒျဇာတျကား (၅) ကား
အခုခတျေမှာဆိုရငျ အသကျ ၁၈နှဈကနေ ၃၄ နှဈကွား မွနျမာလူငယျတှဟော သူတို့ရဲ့ ဖုနျးကနေ Viu App ကို အသုံးပွုပွီး ရုပျရှငျကွညျ့ကွတာ မြားပါတယျ။ အဲဒီအရှယျရဲ့ ၇၀ % သော Viu အသုံးပွုသူတှဟော သူတို့ရဲ့ အခြိနျပိုတှကေို အိမျပွနျကားပိတျနတေဲ့အခြိနျမှာဖွဈဖွဈ၊ ရုံးရဲ့ Break Time တှမှော ဖွဈဖွဈ၊ ဒါမှ မဟုတျလညျး အလုပျပွီးလို့ အိမျမှာနားနတေဲ့အခြိနျမှာ အိပျရာပျေါမှာ အေးဆေးနှပျရငျးဖွဈဖွဈ ရုပျရှငျတှေ ကွညျ့ကွတာ အမြားဆုံးပါပဲ။
ဒီလို အသုံးပွုသူတှမြေားတယျဆိုတာလညျး Viu App ကို လှယျလှယျကူကူနဲ့ ရယူအသုံးပွုနိုငျလို့ ဖွဈသလို ခုမှ စတငျအသုံးပွုမယျဆိုရငျလညျး ဒီ Viu App Link မှာ ဒေါငျးလုတျရယူနိုငျပါတယျ။
ဒီလို လူငယျတှအေတှကျ ထိပျတနျးဘောလီးဝုဒျဇာတျကားကောငျး (၅) ကားနဲ့ သုံးသပျခကျြလေးတှကေို အခုလို ညှနျးပေးပါရစေ။
ဘောလီးဝုဒျရဲ့ မီဂါစတားဖွဈတဲ့ အမီတာဘဂမျြး ဦးဆောငျပါဝငျထားတဲ့ ဇာတျကားကွီး
သုံးသပျခကျြ : Sarkar ဆိုတာ မငျးသားကွီး အမီတာဘဂမျြးက အဓိကဇာတျကောငျနရောပါဝငျထားတဲ့ မှုခငျးဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောရုပျရှငျကို ကွညျ့နတေုနျး ဇာတျကားတော့ စပွီလို့ နားလညျလိုကျတဲ့အခြိနျမှာပဲ ဇာတျကားက အဆုံးသတျသှားပါပွီ။ ရိုကျကှငျးရိုကျကှကျတှဟော ခြီးကြူးရလောကျအောငျ ကောငျးပွီး ဇာတျကောငျစရိုကျအားလုံးပီပွငျတာလညျး တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာ Amitabh Bachchan နဲ့အတူသူ့ရဲ့သားဖွဈတဲ့ Abhishek Bachchan လညျးပါတဲ့အတှကျ သားအဖနှဈယောကျ အတှဲညီညီသရုပျဆောငျတာကိုလညျး တှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြး : Subhash Nagre (Amitabh Bachchan) က ခမျြးသားပွီး သွဇာကွီးမားတဲ့ ဘုံဘမွေို့သားတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ သူဟာ အမရေိကနျနိုငျငံက ကွီးမားခနျ့ထညျလှတဲ့ အိမျတျောကွီးမှာ ဇနီး Pushpa ၊ သားအကွီး Vishnu နဲ့ မိနျးမ Amrita နဲ့ သားအငယျ Shankar တို့နထေိုငျခဲ့ရာမှာ တဈရကျကွမ်မာငငျလာပါတော့တယျ။ နိုငျငံရေးသားတဈယောကျဖွဈတဲ့ Motilal Khurana ဟာ အသတျခံခဲ့ရပွီး လူသတျသမားက Molital ကို လုပျကွံဖို့ သူ့ကို ငှားရမျးတာဟာ Subbash ဖွဈကွောငျးထှကျဆိုခဲ့ပါတယျ။
Subhash ဟာ အဖမျးခံရပွီး အကဉျြးကခြဲ့တဲ့အခါ သူ့အတှကျ တရားရုံးမှာလညျး မြှျောလငျ့ခကျြမရှိသလောကျနညျးနခေဲ့ပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူဟာ ဒီလူသတျမှုကိစ်စအတှကျမဟုတျဘဲ တရားဥပဒမေစိုးမိုးတဲ့အခါမြိုးမှာ Godfather Mafia တဈယောကျလို ကိုယျ့အာဏာစကျနဲ့ ကိုယျဖွရှေငျးခဲ့တဲ့အတှကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမြိုး သွဇာအာဏာကငျးမဲ့ပွီး အကူအညီမဲ့နတေဲ့ Subhash ကို ဘယျလိုအရာတှေ ဖိအားပေးလာဦးမှာလဲ၊ သားအငယျ Shankar ကို သတျဖို့ ကွံစညျနတေဲ့သူကလညျး သားအကွီး Vishnu ဖွဈနတေဲ့အခါ ဇာတျလမျးကို ဆကျလကျကွညျ့ရှုရမှာပါ။
၂) Nishabd (တိတျတိတျပုနျး)
Amitabh Bachchan ရဲ့ Masterpiece ဇာတျကားတှထေဲက တဈကားဖွဈပွီး အသကျ ၆၀ အရှယျအမြိုးသားတဈယောကျဟာ သူ့ရဲ့ အသကျ ၁၈နှဈအရှယျ သမီးကွီးရဲ့ သူငယျခငျြးနဲ့ ခဈြကွိုးသှယျမိတဲ့ ဒရာမာဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။
သုံးသပျခကျြ : Amitabh Bachchan လို Genius တဈယောကျရဲ့ အနုပညာအရညျအသှေးကို ဥပက်ေခာပွုဖို့ဆိုတာ ခကျခဲလှနျးပါတယျ။ ရုပျရှငျမရိုကျတာကွာပမေယျ့လညျး အမီတာဘဂမျြးခတျေကုနျသှားပွီလို့ ပွောလို့ မရပါဘူး။ Nishabd ကိုပဲ ကွညျ့ရငျ သူ့ဟာနဲ့သူ ကောငျးလှနျးနပေါတယျ။ ကနျ့သတျခကျြတှအေားလုံးကို ကြျောဖွတျပွီး လကျတှဘေ့ဝမှာ ရှိနတေတျတဲ့ အခဈြဇာတျလမျးတဈပုဒျကို ကွညျ့ရမှာပါ။ ရုပျရှငျကွညျ့နာတဲ့သူတှကေတော့ ဒီရုပျရှငျကို လကျခံကွမှာ ဖွဈပွီး Amitabh ရဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှအေတှကျဆိုရငျ ကြှနျတေျာ့မှာ ဖျောပွစရာစကားလုံးတောငျမရှိအောငျ သဘောကမြိပါတယျ။ သူ့ဇာတျရုပျအတိုငျးအတိအကသြရုပျဆောငျနိုငျသလို အရငျက သူ့ရဲ့ဒီလောကျ သဘာဝကတြဲ့ သရုပျဆောငျမှုမြိုးကို မတှခေဲ့ရဖူးသလိုတောငျ ဖွဈနပေါတယျ။ သူဟာ အမွဲသဘာဝကကြသြရုပျဆောငျတတျပမေယျ့ Nishabd မှာတော့ သူ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးပုံစံကို မွငျခဲ့ရပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျတော့ ဒီဇာတျကားကို (လုံးဝ) လကျမလှတျဘဲ ကွညျ့သငျ့တယျလို့ ပွောပါရစေ။
ဇာတျလမျးအကဉျြး : Vijay (Amitabh Bachchan) ဟာ သူ့ဇနီး Amrita နဲ့ အတူ ခမျြးခမျြးသာသာကွှယျကွှယျဝဝနဲ့ အိန်ဒိယမှာ နထေိုငျနကွေပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ အိမျထောငျသကျက ၂၇ နှဈလောကျရှိပွီ ဖွဈပွီး သူတို့ရဲ့ သမီးလေး Ritu တောငျ အသကျ ၁၈ နှဈရှိနပွေီဖွဈပါတယျ။ သူတို့မှာ ဧရာမခွံအကယျြကွီးရှိပွီး Vijay ရဲ့ ဝါသနာတဈခုဖွဈတဲ့ ဓာတျပုံလြှောကျရိုကျရာနရောလညျး ဖွဈပါတယျ။ Vijay ရဲ့ ဇနီး Amrita ကတော့ Kuchipudi လို့ ချေါတဲ့ အိန်ဒိယရိုးရာအကမယျတဈဦးဖွဈပွီး ရှတေံဆိပျနှဈခုတောငျ ဒီအကနဲ့ ဆှတျခူးခဲ့ပမေယျ့ မိသားစုကို ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျဖို့အတှကျ သူ့ဝါသနာကို စှနျ့လှတျခဲ့သူဖွဈပါတယျ။ အားလပျရကျတဈရကျမှာ သူတို့ရဲ့ သမီး Ritu ဟာ Jia လို့ ချေါတဲ့ သူငယျခငျြးကောငျမလေးကို အိမျအလညျချေါလာခဲ့ပါတယျ။ Jia ဟာ သွစတွေးလနြိုငျငံ၊ ဘရစ်စဘိနျးမွို့မှာ အိမျထောငျကှဲအမနေဲ့ တူတူနတေဲ့ ကလေးအရမျးဆနျတဲ့ ကောငျမလေးဖွဈပါတယျ။ Ritu တဈယောကျခွကေငျြးဝတျလညျသှားတဲ့အခါမှာတော့ Vijay နဲ့ Jia ကွားအခွအေနတှေေ ပွောငျးလဲကုနျပါတော့တယျ။
Amrita ဟာ Vijay ရုတျတရကျ ရှငျရှငျမွူးမွူးရယျရယျမောမောတှေ ဖွဈလာတာ၊ သီခငျြးလေးတအေးအေး ဖွဈလာတာတှကေို သတိထားမိလာပါတော့တယျ။ ရုတျတရကျ Ritu က Jia ကို အိမျကထှကျသှားဖို့ မောငျးထုတျတဲ့အခါ Vijay က ဟနျ့တားခဲ့ပါတယျ။ Amrita ရဲ့ အကို Shridar က ဒီမိသားစုဆီကို ခဏအလညျလာတဲ့အခါမှာတော့ ဘာတှေ ဆကျဖွဈလာမလဲဆိုတာ…
၃) Janatha Garage ( မတရားမှုကို ရငျဆိုငျခွငျး)
စူပါစတားတှဖွေဈတဲ့ NTR နဲ့ Mohanlal တို့ရဲ့ အံ့မခနျးသရုပျဆောငျမှုတှနေဲ့ စိတျလှုပျရှားစရာ ဇာတျဝငျခနျးတှနေဲ့ ဖှဲ့စညျးထားတဲ့ ဇာတျကား
သုံးသပျခကျြ :Janatha Garage ဟာ အပတျစဉျ ကွညျ့နကွေ Bollywood ဇာတျကားတှနေဲ့ မတူဘဲ ကှဲထှကျပါတယျ။ ဒီဇာတျကားဟာ အကျရှငျဒရာမာအမြိုးအစားဖွဈပွီး ဇာတျကောငျတှကေ ပွငျးပွတဲ့ခံစားခကျြတှကေို ပုံဖျောပေးစှမျးပါလိမျ့မယျ။ သဘာဝပတျဝနျးကငျြကို ခဈြမွတျနိုးတဲ့ ကြောငျးသားတဈယောကျနဲ့ လူတှကေို ကူညီရတာသဘောကတြဲ့ မက်ကငျးနဈတဈယောကျတှဆေုံ့ပူးပေါငျးမိကွပါတယျ။ သူတို့နှဈယောကျလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ ကားပွငျအလုပျရုံက လူတှကေို ကူညီကယျတငျဖို့ ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ လုပျငနျးရှငျတဈယောကျနဲ့ ထိပျတိုကျတှရေ့ပုံဖွဈပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြး : Sathyam ဟာ ကြေးရှာတဈရှာက ဝပျရှော့လေးတဈခုရဲ့ ပိုငျရှငျဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ အကို ဖွဈတဲ့ Shiva ကတော့ ဟိုကျဒရာဘတျမှာ အလုပျလုပျနပွေီး Sathyam အတှကျ ဒီဝပျရှော့ကို ဖှငျ့ထားပေးတာ ဖွဈပါတျ။ အဲဒီညီအကိုတှနေဲ့ သူငယျခငျြးတဈစုဟာ Janatha Gargae လို့နာမညျပေးထားတဲ့ အဲဒီဝပျရှော့လုပျငနျးကို ပြျောပြျောရှငျရှငျလုပျဆောငျနကွေတာပါ။ တဈရကျမှာ Sathayma ရဲ့ အသိမိတျဆှေ တဈယောကျဖွဈတဲ့ ဆငျးရဲသားလူကွီးတဈယောကျရဲ့ ကောလိပျကြောငျးသှားတကျနတေဲ့ သမီးလေးဟာ Accident တဈခုဖွဈပွီး သဆေုံးသှားခဲ့ပါတယျ။ Sathyam နဲ့ သူ့သူငယျခငျြးတှေ သိလိုကျကွတာက အဲဒီကောငျမလေးဟာ ကွေးစားလူမိုကျတှရေဲ့ မုဒိမျးကငျြ့သတျဖွတျတာကို ခံလိုကျရတယျဆိုတာပါပဲ။
ဒီကိစ်စအတှကျ Shiva ရဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈတဲ့ ရဲမှုး Chandrashekar ရဲ့ အကူအညီကို ယူခဲ့ပမေယျ့လညျး ဘာသကျသမှေ မရှိတာရော၊ ဟိုဘကျက သွဇာကွီးမားတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးဖွဈတာကွောငျ့ရော အကူအညီမဲ့နခေဲ့ပါတယျ။ ဒါနဲ့ပဲ Janatha Garage က ညီအဈကိုတှဟော ကွေးစားလူမိုကျတှကေို ကိုယျ့နညျးကိုယျ့ဟနျနဲ့ လကျစားခပြွေီး မတျောတဆမှုအသှငျဇာတျလမျးဆငျခဲ့ပါတယျ။ Chandrashekar က ဒီကိစ်စကို သိရှိပွီး နောကျဆကျတှဲဖွဈလာမယျ့ အကြိုးဆကျတှကေို သူတို့ကိ သတိပေးခဲ့တဲ့အခါ…
၄) Bobby Jasoos ( စုံထောကျဘျောဘီ)
လူသိအမြားဆုံးဘောလီးဝုဒျဟာသဇာတျကားတှထေဲက တဈကား၊ မိသားစု တဈစုလုံး အတူထိုငျကွညျ့ရှုလို့ ရမယျ့ ဇာတျကား
သုံးသပျခကျြ : Jasoos ကို ကွညျ့ဖို့ အခြိနျကုနျရတာ တနျပါတယျ။ ပထမဆုံး ဇာတျဝငျခနျးမှာတငျ ဒီဉာဏျကောငျးလှတဲ့ စုံထောကျမလေးဟာ အကွီးကွီးတှေ ထုတျဖျောဖို့ ဆန်ဒရှိပမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ လငျခနျးမယားခနျးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ ကိစ်စတှနေဲ့ အတှဲလိုကျခြောငျးတဲ့ ကိစ်စမြိုးတှပေဲ လုပျနရေပါတယျ။
ဇာတျလမျးအကဉျြး : သမီးကွီးဖွဈတဲ့ Bobby (Vidya Balan) ဟာ ဟိုကျဒရာဘတျမွို့မှာ မိသားစုနဲ့အတူ နထေိုငျနပွေီး နောကျယောငျခံလိုကျရတာ၊ စုံစမျးထောကျလှမျးရတာကို ဝါသနာထုံသူပါ။ သူ့အဖကေ ခှငျ့မပွုပမေယျ့ စုံထောကျတဈယောကျဖွဈဖို့ ကွံစညျနသေူလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့စှနျ့စားခနျးတှထေဲက တဈခုကတော့ သူရဲ့ သူငယျခငျြး Afreen အတငျးအကွပျမိဘပေးစားမင်ျဂလာဆောငျခံရတဲ့ ကိစ်စလညျးပါပါတယျ။
တဈခါမှာတော့ ခမျြးသာတဲ့ လူတဈယောကျက Bobby ကို အလုပျတာဝနျစခေိုငျးခဲ့ပါတယျ။ ကလေးမလေးနှဈယောကျရဲ့ အသကျ၊ နာမညျနဲ့ မှေးရာပါအမှတျအသားတှေ ပွောပွပွီး ဟိုကျဒရာဘတျမွို့ထဲ ရှာခိုငျးတာပါ။ အဲ့ဒါအပွငျ နောကျဆုံးအလုပျတာဝနျအနနေဲ့ လူတဈယောကျကိုလညျး ထပျရှာခိုငျးခဲ့ပါသေးတယျ။
အဲဒီလို အခြိနျမြှာ Tasawur (Ali) လို့ ချေါတဲ့ ခပျခြောခြော တီဗှီအစီအစဉျတငျဆကျသူတဈယောကျဟာ တခွားသူတှရေဲ့ လကျထပျခှငျ့ကို ငွငျးပယျပွီး ဘျောဘီကို လကျထပျခှငျ့ရဖို့ သူ့မိသားစုကို ခဉျြးကပျခဲ့ပါတယျ။ ဘျောဘီကတော့ သူ့ကို ငွငျးမယျလို့ ထငျတဲ့အတှကျ ဒီလို ခဉျြးကပျတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ လူခမျြးသာ သူဌေးကွီးက ကလေးမနှဈယောကျကို ဘာတှလေုပျခဲ့ပါသလဲ? Bobby ကရော Tasawur နဲ့ ကိစ်စကို ဘယျလို ဖွရှေငျးမှာလဲ ဆကျကွညျ့ရမှာပါ။
၅) JaanEmann (သုံးပှငျ့ဆိုငျ)
Salman Khan ပါတဲ့ သုံးပှငျ့ဆိုငျအခဈြဇာတျကားကောငျးတဈကား
သုံးသပျခကျြ : Jaanemann ဇာတျကားဟာ Salman khan ရဲ့ သရုပျဆောငျမှုကို အကောငျးတကာ့ အကောငျးဆုံးမွငျရမယျ့ ဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ မူလဇာတျလမျးထဲမှာမှ ဇာတျလမျးတဈခုထပျပြိုးထားသလို နောကျထပျဇာတျဝငျခနျးက ဘာဖွဈလာမလဲဆိုတာ အမွဲတမျးသိစခေငျြနမှောပါ။ Salman Khan နဲ့ Akshay တို့ဟာ Preity Zinta ဆိုတဲ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျတညျးအပျေါခဈြမိတဲ့အခါ ဘယျလို အတကျအကတြှနေဲ့ ဒီသုံးပှငျ့ဆိုငျအခဈြဇာတျလမျးကို ဖှဲ့စညျးထားသလဲ။ သူ့ရဲ့ဇနီးဟောငျးကို မယားစရိတျအမြားကွီးထောကျပံ့ရတဲ့ ဘဝကနေ လှတျကငျးအောငျလို့ ဘယျလို ပွနျခဈြလာအောငျ လုပျမလဲ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးခြုပျ : Jaan-E-Mann ဟာ ရိုမနျတဈဆနျတဲ့ ဘောငျထဲမှာ Suhaan နဲ့ Piya တို့ရဲ့ မင်ျဂလာပှဲကနေ ကှာရှငျးမှုကို ဦးတညျသှားတဲ့ အဖွဈအပကျြတှေ Priya ဟာ သူ့ရဲ့ ကောလိပျကြောငျးသူငယျခငျြး Agastya နဲ့ စစေ့ပျသှားတဲ့ ဖွဈရပျကို ဦးတညျသှားခဲ့ပါတယျ။ Agastya ဟာ Piya တဈယောကျ Suhaan ကိုပဲ ဆကျခဈြနပွေီး သူ့ကို မခဈြဘူးဆိုတာ သိရတဲ့အခါ…
တကယျလို့မြား ဒီအားလပျရကျမှာ Movie Marathon ကို မမောတမျးကွညျ့မယျဆိုရငျတော့ Viu ကနပွေီး မလေ ၂၅ ရကျနေ ၂၇ ရကျနထေိ့ ပေးထားတဲ့ FREE BOLLYWOOD WEEKEND အစီအစဉျလေးရှိနပေါတယျ။ Viu မှာ ရှိသမြှ ဘောလီးဝုဒျဇာတျကားမှနျသမြှကို အခမဲ့ကွညျ့နိုငျတဲ့အတှကျ ဒီအခှငျ့အရေးကို လုံးဝလကျမလှတျသငျ့ပါဘူး။
ဒါတငျမဟုတျဘဲ Viu မှာ အလနျးဆုံး အာရှဇာတျကားနဲ့ စီးရီးတှမြေိုးစုံ၊ ထိုငျး၊ အိန်ဒိယ၊ ဂပြနျ၊ ကိုရီးယားနဲ့ မွနျမာပွညျကနေ ရိုကျကူးတငျဆကျတဲ့ Comedy ၊ Horror ၊ Romance ၊ Action နဲ့ Drama ဇာတျကားတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ နတေို့ငျးနီးပါး ဇာတျကားအသဈတှေ တငျပေးနတေဲ့အတှကျလညျး ရှေးခယျြစရာတှေ အမြားအပွားရှိမှာပါ။ ပွီးတော့ တခွား Apps တှနေဲ့မတူခွားနားတဲ့ Viu ရဲ့ အကောငျးဆုံးအခကျြကတော့ Viu မှာ ရှိတဲ့ Video အားလုံးဟာ ၁၀၀% မွနျမာစာတမျးထိုးပေးထားတာဖွဈပါတယျ။
ဒီလို အရမျးမိုကျတဲ့ အခှငျ့အရေးကို ရယူဖို့ ဘာတှေ စောငျ့နဦေးမှာလဲ။ Viu App ကို ခငျဗြားရဲ့ Android ဖုနျးမှာ Google Play Store ကနေ ခုပဲ ဒေါငျးလုတျရယူလိုကျပွီး Viu မှာရှိတဲ့ အလနျးဆုံး အာရှရုပျရှငျနဲ့ စီးရီးတှကေို ကွညျ့ရှုခံစားခှငျ့ကို ရယူလိုကျပါ။ Facebook Account နဲ့ Sign up လုပျပွီး တဈလ အခမဲ့ စမျးသပျကွညျ့ရှုခှငျ့ (One- month free trial) ကို ရယူနိုငျသလို ငှေ ၁၅၀၀ ကပျြတညျးနဲ့ Viu Premium ကို Subscribe လုပျပွီး နောကျထပျဇာတျကားနဲ့ စီးရီးဈတှကေို ကွညျ့ရှုခှငျ့ကိုလညျး ရယူနိုငျပါတယျ။
Viu အကွောငျးထပျသိခငျြသေးတယျဆိုရငျတော့ Viu ဆိုတာ over-the-top (OTT) video service တဈခုဖွဈပွီး Vuclip ရဲ့ ထုတျကုနျတဈခုဖွဈပါတယျ။ Viu ကို စငျကာပူ၊ မလေးရှား၊ အိန်ဒိယ၊ အငျဒိုနီးရှား၊ ဖိလဈပိုငျ၊ ထိုငျး၊ မွနျမာ၊ ဟောငျကောငျနဲ့ အရှအေ့လယျပိုငျးက နိုငျငံ ၈ နိုငျငံအပါအဝငျ ဈေးကှကျ ၁၆ ခုမှာ စတငျမိတျဆကျခဲ့ပါတယျ။ စပွီးခပြွတညျးက ခြီးကြူးဂုဏျပွုမှုတှေ အမြားကွီး ရရှိထားပွီး ၂၀၁၆ ခုနှဈရဲ့ HKICT Awards မှာ အကောငျးဆုံး မိုဘိုငျးလျ App ဆုကနေ ၂၀၁၇ ဒီဇငျဘာမှာ အရှအေ့လယျပိုငျးဒသေတှငျး အသုံးအမြားဆုံး App အနနေဲ့ Google က အသိအမှတျပွုထားတဲ့အထိ ပါပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ Viu ဟာ Beta Version အနနေဲ့ ဧပွီလ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ စတငျဖှငျ့လှဈခဲ့ပါတယျ။ Viu ရဲ့ ရပျတညျခကျြကတော့ မွနျမာဈေးကှကျနဲ့ သငျ့တျောတဲ့ အာရှရဲ့ အကောငျးဆုံး Content တှပေျေါမှာ အခွပွေုရပျတညျဖို့ဖွဈပါတယျ။ ဒီဈေးကှကျမှာရှိတဲ့ ကွညျ့ရှုသူဖောကျသညျတှအေတှကျ ခိုငျမာပွီး စိတျဝငျစားဖို့ ကောငျးတဲ့ ရပျတညျခကျြရှိတယျလို့ ယုံကွညျထားပွီး ဈေးကှကျညှနျးကိနျးတှအေားလုံးရဲ့ ညှနျပွခကျြအရ မွနျမာဈေးကှကျဟာ Viu လို အရှတေ့ောငျအာရှမှာ ဦးဆောငျနတေဲ့ Content/ broadcast houses တှရေဲ့ အစဉျမပွတျထုတျလှငျ့နတေဲ့ အစီအစဉျတှနေဲ့ Freemium ထုတျကုနျပေါငျးစပျထားတဲ့အရာကို သုံးစှဲဖို့ အသငျ့ရှိနပွေီလို့ သိထားပါတယျ။
Vuclip လို့ ချေါတဲ့ PCCW Media Company ဟာ ကယျလီဖိုးနီးယား၊ ဆီလီကှနျ Valley မှာ ရုံးစိုကျထားတဲ့ ကမ်ဘာတဝှမျး နိုငျငံ ၂၂ ကြျောမှာ ဦးဆောငျနတေဲ့ Video – on- demand service provider ဖွဈပါတယျ။ PCCW Limited ဟာတော့ Telecommunications ၊ Media ၊ IT Solutions ၊ Property Development and Investment နဲ့ အခွားလုပျငနျးတှမှော မွှုပျနှံထားတဲ့ ဟောငျကောငျအခွစေိုကျ ကမ်ဘာလုံးဆိုငျရာကုမ်ပဏီတဈခုဖွဈပါတယျ။ PCCW Media ဟာ အကွီးဆုံးနယျမွခေံ pay-TV လုပျငနျးတှနေဲ့ Now TV လုပျငနျးဆောငျရှကျနတောတှအေပွငျ Vuclip ကတဆငျ့ over-the-top (OTT) video service Viu ရဲ့ သတျမှတျပွဌာနျးခကျြအတှငျး လုပျကိုငျဆောငျရှကျနပေါတယျ။